We She Me: Baby Bonus
ဇနိ - 7/4/08, 1:37 AM
ကလေးလည်း လိုချင်တယ်၊ Baby Bonus လည်း လိုချင်တယ်..
ဝေတိုး - 7/4/08, 4:48 AM
်အော်ဇီကိုပြောင်းမှထင်တယ်။သိတဲ့အတိုင်း ဒီမှာက မလွယ်။
nu-san - 7/4/08, 12:57 PM
ဒီမှာလည်း အဲဒီလိုပေးတယ် ကြားတယ်။ ဒါပေမယ့် အမလည်း သိပ်တော့ နားမလည်ဘူး။ ခဏခဏ rule တွေက ပြောင်းနေတာ ဆိုတော့တော်ကြာကိုယ့်အလှည့်ကျမှ မပေးတော့ဘူးဖြစ်ရင် ဒုက္ခ.. :P
အမ ဒီရောက်ကတည်းက မန်နေဂျာနဲ့ R&D ဒါရိုက်တာက ကလေးယူဖို့ပြောတယ်။ ပိုက်ဆံမကုန်ဘူး။ အကုန်အကျများမှာ ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့ ကလေးမွေးလို့ ထောက်ပံ့ကြေးရမယ်ဘာညာပြောပေးမယ့် ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ ကိုယ်မို့ ဘာမှ ပြန်မပြောပဲ ငြိမ်နေရတယ်။ ဒီမှာက ပေးတာက ကိုယ်နေတဲ့ မြို့ပေါ်လည်း မူတည်တယ်လို့ပြောတယ်။ ကိုယ်ကလည်း တကယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါလေးတွေ သိထားတော့ ကောင်းတာပေါ့နော်.. :)
MrDBA - 7/4/08, 3:52 PM
အဟီး ... အနော်လဲမွေးမယ် ခလေး။
မဇနိ - 7/4/08, 4:15 PM
ဒီမှာလည်း Baby Bonus ပေးတယ်ပြောတယ်ဗျ။ ဘယ်လောက်ရတယ်တော့ သေချာမသိဘူး။ သီရိလင်္ကာကျောင်းသူတယောက်ကတော့ နောင်နှစ်ကျောင်းပြီးတော့မှာမလို့ အမှီကလေးယူတယ်တဲ့။ အိမ်ပြောင်းတာနဲ့မတွေ့ကြတာ ပြန်တွေ့တော့ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ အံ့သြလို့မေးမိမှ တွက်ကိန်းနဲ့ ယူလိုက်တာတဲ့။ ဒီ Bonus ကိုတော့ လိုချင်တယ်လို့ ပြောရဲဘူး။ :P
Aung Myo Htet - 7/4/08, 7:54 PM
looks like you've been to aifs website :)
Taungoo - 7/5/08, 3:01 AM
ဒီတစ်ခေါက်လာတာ အိမ်ထောင်သည်တွေကြားထဲ ရောက်လာမိပြီ
Andy Myint - 7/6/08, 11:56 AM
အဲဒါဆိုလည်း Bonus ရနိုင်တဲ့ နေရာမှာ ကလေးမွေး မဇနိရေ။ သားရွှေအိုး ထမ်းလာတယ်ပေါ့။
အဲဒီမှာလည်း ကောင်းတာပဲ မဝေတိုးရဲ့ စားရိတ်တော့ ကြီးမှာပေါ့။ ကျားကြီး ခြေရာကြီးလေ။
အဲဒါတွေ သိထားရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့ မနုစံရယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမွေးတာက ကြာကြာ စောင့်လို့ မရတာတွေလည်း ရှိနိုင်သေးတယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို စောစော ယူဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။
မွေးဗျာ.. Mr DBA Database တွေလည်း ထွက်လာဦးမယ်။
ဟိုးတလောကတော့ အဲဒီ Web Site ကို တစ်ခေါက် ရောက်သေးတယ် အောင်မျိုးထက်
ဟားဟား လူပျိုလေး ကိုတောင်ငူကလည်း စိတ်မညစ်ပါနဲ့ အေးဆေး ကလေးမွေးပါ။
gate - 7/9/08, 11:28 PM
ကျနော့်အလုပ်ကလူကတော့ baby bonus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်မကျေနပ်ဘူးဗျ။တို့က tax return လည်းမရဘူး။သူတို့က tax return လည်းရတယ်။ baby bonus လည်းရတယ်ပေါ့။သူ့ Partner နဲ့သူက same sex couple ဆိုတော့။ဟားဟား။
Anonymous - 3/3/09, 5:28 AM
Thank you for your info. In your recent post, I requested to add the info about baby bonus. Appreciated for your sharing.